आमालाई खुसी बनाउन आमाकै विरुद्ध मुद्दा हालें | Ratopati
personमदनकृष्ण श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २१, २०७६ chat_bubble_outline2
धेरै वर्षअघि तुमलिङटारमा जहाज दुर्घटना भएको थियो, ठ्याक्कै मिति बिर्सें । त्यतिबेला थुप्रैले ज्यान गुमाएका थिए । ज्यान गुमाउनेमा आमा र बच्चा पनि थिए । यसबारे मैले समाचार पढेको हुँ । आमाले बच्चालाई बेसरी छातीमा टाँसेकी रहिछन् । बच्चाको छाती आमाको छातीमा टाँसिएको रहेछ । दुवैको शरीर र कपडा जलेको थियो रे । तर, शव छुटाउँदा बच्चा टाँसिएको आमाको छातीनेरको कपडा जलेको थिएन रे । ती आमाले कति जोडले बच्चालाई च्यापिन होला ! ठोक्किँदा, आगोले पोल्दा पनि बच्चालाई छाडिनछन्, यही त हो आमाको माया ।
madan krishna2आमा भगवानको अर्को रुप हुन् भन्ने लाग्छ मलाई । तर, मैले आमाबाटै आमाको माया अनुभव गर्न पाइनँ । म ६ महिनाको हुँदा मेरी आमा बित्नुभएको हो रे । सम्झनामा सचित्र त आमा हुनुहुन्न तर भावनामा हुनुहुन्छ । उति बेला फोटो त्यति प्रचलनमा आइसकेको थिएन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको जमाना थियो । धेरैपछि हो मैले मेरी आमालाई तस्बिरमा हेरेको । मामाको घरमा जाँदा यी तिम्री आमा भनेर मलाई तस्बिर देखाइएको थियो । ए, यस्ती पो हुनुहुँदो रहेछ मेरी आमा भनेर धेरैबेर तस्बिर हेरेको याद छ ।
बितेका आमाहरू कसैलाई पनि सानीआमा भनेर सम्बोधन गरेको मलाई सम्झना छैन । सबैलाई आमा भनेरै सम्बोधन गर्थें । पछिल्ली आमा जो अहिले हुनुहुन्छ, उहाँलाई आमा भन्छु । मेरो शब्दकोषमा सानिमा भन्ने शब्द छैन । यतिसम्म कि नाटक, टेलिफिल्म, चलचित्र, प्रहसन, रेडियो कार्यक्रम केहीमा पनि मैले ‘सानीआमा’ उच्चारण गर्नुपर्नेछ भने त्यो मलाई स्वीकार्य हुँदैन । ‘सानीआमा’ उच्चारण गर्नुपर्ने कुनै भूमिका छ भने पनि त्यसमा खेल्दिनँ । किन–किन मलाई आमा नै भन्नुपर्छ ।
बुवाले मलाई सानै उमेरमा जागिर लगाइदिनुभयो । मैले १४ वर्षमै पढाउने जागिर गर्थें । पछि सञ्चयकोषमा पनि जागिर खाएँ ।
धेरैपछि हो मैले मेरी आमालाई तस्बिरमा हेरेको । उतिबेला फोटो त्यति प्रचलनमा आइसकेको थिएन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको जमाना थियो । मामाको घरमा जाँदा यी तिम्री आमा भनेर मलाई तस्बिर देखाइएको थियो । ए, यस्ती पो हुनुहुँदो रहेछ मेरी आमा भनेर धेरैबेर तस्बिर हेरेको याद छ । आठ वर्षमै मैले तीनवटी आमा गुमाएँ । मेरो शब्दकोसमा ‘सानिमा’ भन्ने शब्द छैन ।
सानोमा मलाई आमाको अभाव महसुस हुन्थ्यो । अरुका आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गरेको देख्थें । साथीहरूले ‘आमा’ भनेको सुन्थें । मलाई पनि आमा भनेर बोलाउने रहर हुन्थ्यो । मेरो हरि तन्डुकार भन्ने साथी थियो । सानोमा मैले उसको आमालाई ‘हरिमा’ भनेर बोलाउँथेँ । ‘हरिमा’ भन्दा अर्कै रमाइलो लाग्थ्यो । हरिमाले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो ।
सानोमा मैले एउटा गुलेली बनाएँ । म अलि टेक्निकल दिमागको थिएँ । अरुले बाँसको फिरफिरे बनाएर उडाएको देख्थेँ । मैले मकैको डाँठ जोडेर हेलिकोप्टरजस्तो बनाउँथे, त्यसमै फिरफिरे जडेर उठाउँथेँ । रबरको गुलेली पनि राम्रै बन्यो, ठ्याक्कै निसाना लाग्ने । गुलेली लिएर हिँडेको थिएँ, रुखमा एउटा भंगेराले छाती फर्काएर बसेको देखेँ । ताकेर हिर्काएको भंगेरा खसिहाल्यो । भंगेरा लिएर दगुर्दै घरमा गएँ, के–के नै पौरख गरेको देखाउनु थियो । घरमा गएर भनें, ‘हजुरबा, मैले भंगेरा मारें ।’
म त सिकारी, निसाना चुकाइन्, हजुरबाले स्यावासी दिनु होला भन्ठानेको थिएँ । हजुरबाले त गाली गर्नुभयो, ‘बदमास, किन मारेको भंगेरा ? यो कात्तिक–मंसिरमा चराचुरुंगीको गुँड हुन्छ, बचेरा हुन्छन् । तैंले मारेको भंगेराको पनि बचेरा हुन सक्छ । बचेरालाई आहार खोज्न निस्केको हुन सक्छ । तैंले मारिदिएपछि कसले हेर्छ ती बचेरालाई ? ती बचेरा भोकभोकै मर्नुपर्दैन ?’
हजुरबाको कुराले म खङ्ग्रङ्ग भएँ । म आफू बचेरा भएर गुँडमा बसिरहेको र मलाई आहार खोज्न गएकी मेरी आमालाई कसैले मारिदिएको सोच्न पुगेँ । हजुरबाको कुरा केटाकेटी मनमा निकै गहिरोसँग गढ्यो । पछि ‘साझा पृथ्वी’ भन्ने टेलिफिल्म बनाउँदा यही प्रसंग राखेका छौं ।
उमेर र अनुभवसँगै बुझ्दै जाँदा देश आमाजस्तै लाग्दो रैछ । कलाकार किरण केसी भाइले मलाई एउटा गीत लेख्न भने । एउटा लेख्छु भनेको लेख्दै जाँदा आठवटा पुग्यो । आठवटै गीतलाई आफैंले संगीत दिएँ । एउटा नेवारी गीत थियो । गैरनेवारले नेवारी गीत गाउँदा बेग्लै स्वादको बन्यो ।
त्यसमध्ये एउटा देशलाई आमा बनाएर लेखेको गीत छ–
हे मेरी आमा, नेपाल आमा प्यारी आमा तिमी ।
सारा नेपालीहरूका श्रद्धेयी छौ तिमी ।।
आमाको आमा बुवाको आमा पुर्खाकै आमा तिमी ।
यो धर्तीमा नेपालीलाई जन्म दिने तिमी ।।
मुठी दिँदा मुरी दिन्छौँ धन्य धर्ती माता ।
सन्ततिलाई दिई नथाक्ने हे अथक दाता ।।
लिनमात्रै कति लिनु तिमीसँग हे देश ।
दिनु नि सक्नुपर्यो तिमीलाई आफूसँग जे छ ।।
देशलाई त सपुतले लिन्छ होइन दिन्छ ।
बुद्धको घर घरको घर सगरमाथाको घर ।
हे नेपाल जय नेपाल नेपालीको घर ।।
यो गीत किरण केसीले गाइसकेका छन् । तर, सार्वजनिक भएको छैन ।
मेरो मामा केदार श्रेष्ठ, अहिले काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । मलाई बोलाइरहनुहुन्छ । भान्जाभान्जी आएर जति खायो, त्यति बढ्छ भन्नुहुन्छ । मामा अलि भावुक हुनुहुन्छ । उहाँकोमा जाँदा अखबारमा छापिएका मेरा तस्बिर देखाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘आज दिदी भएको भए कति खुसी हुँदी हुन् ।’
मेरी साधना बहिनी, अहिलेकी आमाकी कान्छी छोरी । उसैले हो मलाई आमाको महत्त्व बुझाएकी । उसका तीन छोरा थिए । जेठा कलेज पढ्दै थिए । कलेजबाटै गल्छीमा पिकनिक जाँदा उनलाई खोलाले बगायो, यो घटना भएको १५ वर्ष भयो होला । बहिनीले अझै पनि छोरा बित्यो भन्दिनँ, हराएको भन्छे । छोरा बित्यो, खस्यो, मर्यो भन्ने शब्द उसले उच्चारण गरेको हामीले सुनेका छैनौँ । एक वर्षसम्म त राति ढोकामा चुकुलै लगाउँदिनथी, राति छोरा आउँछ कि भनेर । एक वर्षभन्दा बढी छोरा सम्झेर एक्लै हिँड्ने, कसैसँग कुरा नगर्ने गरी । छोरा खसेदेखि अहिलेसम्म भात खाएकी छैन । रोटी, तरकारी, चिउरा अन्य कुरा खान्छे । छोराको नाममा भातै खान छाडी ।
उसको मुहारमा हाँसो फर्कनै थुप्रै वर्ष लाग्यो । पछि उसले चाइल्ड केयर सेन्टर खोली । नयाँ बजारमा अहिले पनि छ, साधना ममता ह्याप्पी चाइल्ड केयर । चाइल्ड केयर खोलेर बच्चाहरूसँग रमाउन थालेपछि भने ऊ केही खुसी देखिन थाली ।
वास्तवमा मैले आमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाइनँ । त्यसैले आमाबारे बोल्नुपर्यो भने मलाई सकस हुन्छ ।
अभिनय क्षेत्रमा भर्खर–भर्खर लागेका बेलाको कुरा हो । एउटा साथीले मलाई नाटकमा प्रमुख भूमिकामा खेल्न भन्यो । नाचघरमा देखाइने नेवारी नाटक थियो । नाटकको सुरुमै आमाको फोटो हेरेर भावुक हुँदै ‘मा’ भन्नुपर्ने थियो । जन्म दिने आमालाई साँच्चिकै सम्झेको भाव आउनुपथ्र्यो । खै मनमा के पर्यो ? मैले यो भूमिका निभाउनै सकिनँ र त्यो नाटक खेलिनँ ।
जीवन भोग्दै–बुझ्दै जाँदा, बहिनीले आफ्ना छोराछोरीलाई गरेको माया देख्दा, मेरी श्रीमतीले छोराछोरीलाई गरेको माया देख्दा, मैले आमाको महत्त्व, महिमा अरु बढी बुझेको छु ।
कहिलेकाहीँ आमा र सन्तान छुटिनुपर्ने पनि होला, यसका थुप्रै कारण होलान् । तर, संसारका सबै पोथी जातिले आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउन माया गरेकै देखिन्छ ।
संसार मायाले नै अडेको छ । त्यसमाथि आमाको माया त मायामा पनि महामाया हो । सबैभन्दा ठूलो माया आमाकै माया हो– आमाले सन्तानलाई गर्ने माया र सन्तानले आमालाई गर्ने माया । मानवले आफ्ना मातापितालाई भुल्नु हुँदैन । उपेक्षा, हेला गर्नु हुँदैन । समाजमा कतिपय मानिसले आमालाई हेला गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । यस्तै सन्तानका लागि होला ‘कुलंगार’ भन्ने शब्द प्रयोग हुने । यो अधर्म हो । छोराछोरीको पहिलो धर्म नै आमाबाबुलाई हेर्नु हो ।
मैले मेरी आमाको तस्बिर पूजाकोठामा राखेको छु ।
May 7, 2019, 7:20 a.m. Suresh
आमाबाबु हुनुको अर्थ तपाईंले आफू लाइ भन्दा छोराछोरीलाई प्रेम गर्नु हो ।
May 5, 2019, 11:48 p.m. You
Banking fraud 😜 fataha